Iswiidhan waa dalka ugu wacan soo galotiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iswiidhan waa dalka ugu wacan soo galotiga
La daabacay onsdag 24 oktober 2007 kl 15.41
Cilmi baaris lagu sameyey dhanka soo dhoweynta shaqaalaha asal ahaan ka soo jeeda dalka dibaddiisa ayaa lagu ogaadey iney farqiyo ballaaran u dhexeeyan waddammada Yurub.
Dalkan Iswiidhen ayaa kalinta koowaad galey, halka ey Letland ka gashey kaalinta ugu dambeeysa, sida lagu ogadey cilmi baris uu dhaqaale geliyey ururka midowga Yurub.
Cilmi baaristaa ayaa lagu ogaadey in guud ahaan waddammada ku yaala qaaradda Yurub ey hirgeliyaan bar, baahidii laga sugayey ee la xiriirta sidii ajnabiga loogu mili laha bulshada inteeda kale, sida ey caddeeyen culimo ka kala socotey 25 heyadood, laguna daabacey bogga internetka ee heyadda wararka ee BBC.
Inta la hubo waxaa ku sugan 25-ka dal ee xubnaha ka ah ururka midowga Yurub soo galooti tiradooda lagu qiyaasey 21 malyuun, middaasina oo ey ku caddaatey barnamijka loogu magac darey The Migrant Integration Policy Index oo ururku miisaaniyad geliyo, kaasina oo hoowshiisu tahey sidii safka hore loo soo gelin lahaa howlaha tixgelinta ajnabiga ee waddammada xubnaha ka ah ururka midowga Yurub.
Xuquuqda soo galootiga ee suuqa shaqada, suurtagalka iney helaan hooy joogto ah, suurtagal in ruuxa soo galootiga ah reerkiisa loo keeno iyo shuruucda waddammadaa ee la xiriira ka hortagga faqooqnaanta iyo fikir xumada laga qabo dadyoowgaa, ayaa ka mid ahaa 140-ka cutub ee cilmi baaristaasi la xiriirtey.
Shanta dal ee ajnabigu ugu badan yihiin ee EU-da, Boqortooyada ingiriiska, Ispaanishka, Jarmalka, talyaniga iyo dalka Faransiiska, kuwaasina oo dalka talyaanigu ugu sito marka loo bar bar dhigo afarta kale.
Isku soo wada duub, waxaa kaalinta koowaad xayuubsadey dalkan Iswiidhen, marka laga hadleyo howlaha habsami wanaaga ee isdhexgalka.
Marka laga yimaado kaalinta uu dalkan Iswiidhen ka galey cilmi baaristaa waxey haddana qaar ka mid ah sharciyahannada Iswiidhen sheegeen in xaqiiqdu middaa ka duwan tahey.
Christian Robergh, ayaa ka mid ah sharciyahannada.
-Dhibaatadu waxey tahey in an laga hadleyn natiijada ee laga hadleyo habka shuruucdu u qoran yihiin. Heyadda socdaalka qudheda ayaa warbixin ka soo baxdey ey caddeneysaa iney jiraan kumanyaal ajnabiya ee soo galootiya oo aan heysan ama heli kareyn wax shaqo ah. Wey kala duwan tahey sharciga waxa ku qoran iyo sida xaqiiqdu, ama nololmaalmeedka dadyoowgaasi yahey/tahy, sida uu sheegey Christian Robergh ahana hormuudka qorshaha EU-da ee loogu magac darey kooxda mowduuca ee soo galootiga iyo is hexgalka: temagruppen asyl & integration.
Madaleine Seilidse, Madaxa heyadda u doodda xuquuqda bani’aadamka, Amnesty ayaa iyaduna midda ku raacsan Christian, iyadoona sheegtey iney jiraan goobo uu dalkan ka geleyo kalin aad u hooseysa sida habka daryeelka caafimaadka ee qaxootiga iyo soo galootiga.